Maqal: Munaasabado lagu taageerayay maamulka Jubaland oo ka dhacay Boosaaso – SBC
Maqal: Munaasabado lagu taageerayay maamulka Jubaland oo ka dhacay Boosaaso
Munaasabadan lagu taageerayay maamulka Juba Land ee ay horkacayaan Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa Axmed Madoobe Iyo Gen Cabdulaahi Fartaag ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka ee degmada boosaaso.
Waxaana xafladan ka soo qayb galay iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta Puntland nabadoono aqoonyahano waxgarad dhalinyaro iyo qaar ka mid ah shacabka ku nool 16 xaafadood ee ay ka kooban tahay Degmadan Boosaaso kuwaasoo sidoo kale ay ka mid ahaayeen Gudoomiyaha gobolka bari Cabdisamad Maxamed Galan iyo Duqa degmada boosaaso Xasan Cabdalla Xasan.
Ugu horayn waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka degmada boosaaso Khadro Dhuungale oo iyadu si aad ah ugu nuuxnuuxsatay haweenka boosaaso in dhinac walba oo isugu jira dhaqaale iyo adinba ay kaga qayb qaadanayaan nabada horumarka maamulka Juba Land Iyadoo dhanka kale ugu baaqday in dowlada federaalka ay taageerto.
RIIX AMA DAAR
Waxaa kaloo halkaasi ka hadlay Nabadoon Cabdiqaadir Axmed Xarago Iyo Nabadoon Abshir Dhegcas oo labadoodaba ay sheegeen in ay soo dhowaynayaan maamulkaas cusub sidoo kalana waxay fariin u direen odoyaasha beelaha hawiye ee xamar ku sugan in ay hadaladooda ka dhanka ah maamulka Juba Land ay ka fiirsadaan haday yihiin odoyaal looga baahan yahay maslaxad guud Dadka ay odoyaasha u yihiina ay uga kiciyaan Guryaha Dhulka Iyo Beeraha ay haysteen 22 kii sano ee la soo dhaafay.
Duqa degmada boosaaso Xasan Cabdalla Xasan ayaa isna ka mid ahaa masuuliyiintii ka hadashay Taageerida Juba land waxaana uu sheegay in ay hiil iyo hoo la garab taagan yihiin walaalahooda degan gobolada Jubooyinka iyo Gedo kuwaasoo dhistay maamulka Jubaland.
Waxaana ugu danbayntii halkaasi ka hadlay Gudoomiyaha gobolka barri Cabdisamad Maxamed Galan oo isagu hambalyo u diray shacabka ku nool deegaamada Juba land madaxweynaha maamulkaas Axmed Madoobe iyo ku xigeenkiisa Generaal Cabdullaahi Fartaag waxaana uu dhanka kale uu fariin u diray masuuliyiinta dowlada soomaaliya oo ku aadan in ay taageeraan Maamulka Jubaland hadii kalena ay cadaanayso in aysan rabin in la dhaqan galyo dastuurka federaalka ah.